Ungasihlola kanjani isimo sebhethri lakho ngalezi zinyathelo ezilula | Izindaba ze-IPhone
Ungasihlola kanjani isimo sebhethri lakho ngalezi zinyathelo ezilula
UJesu uyasika | | Okokufundisa namanyuwali
Njengoba isikhathi sihamba, kuyinto ejwayelekile kuwe ukuthi uqaphele ukuthi ibhethri ledivayisi yakho ye-Apple ukugcina okuncane nokuncane. Ngokuvamile, lokhu kuvamile futhi akufanele sikhathazeke noma sithuke ngoba lapho sisetshenziswa, ibhethri lizoguga.
Uma siqaphela ukuthi ubude be- ibhethri lifushane kakhulu futhi sibe ne-iPhone yethu noma i-iPad isikhashana kungaba lula xhumana nensizakalo yezobuchwepheshe esemthethweni ukubheka isimo sayo, ngoba kungenzeka sinamaphutha efektri futhi sidinga ukusiguqula. Uma kunesiqinisekiso, ukuvakasha kuyisidingo ngoba ngeke kusibize ngalutho futhi ngokuhamba kwesikhathi kuzosizuzisa. Uma lokhu kuyicala lakho, sincoma ukuthi ufunde ngaphambilini i-athikili eshicilelwe lapho sikhuluma khona nge- isiqinisekiso amabhethri.
Kokuthunyelwe okungenhla, sikhulume ngokushintshwa kwebhethri noma ngabe kunewaranti, kungenzeka ukuthi inqatshelwe uma ingahlangabezani nemibandela ye-Apple, okungukuthi ukushaja imijikelezo kumele babe phakathi kuka-80% no-100% futhi-ke awukaze uvakashele ngaphambilini noma iyiphi enye insizakalo yezobuchwepheshe engagunyaziwe.
1 Uyini umjikelezo wokushaja?
2 I-iPhone ne-iPad yami inamashajuli amangaki?
3 Ngisibheka kanjani isimo sebhethri lami?
3.1 Ukufaka uhlelo lokusebenza
3.2 Ukufaka iBackupbot ku-Mac yethu
3.3 Ngabe ulwazi ngalunye lusho ukuthini?
Uyini umjikelezo wokushaja?
Un ukushaja umjikelezo Kulapho siqedela u-100% webhethri, kungaba ngokushaja okukodwa noma ngokuningana, okungukuthi, siqala ekuseni nge-iPhone ngebhethri elingu-100% kuthi lapho kufika intambama sisasele ngama-50% bese siyakufaka ngokuphelele. Sizobe sesiqede uhhafu womjikelezo wokushaja. Uma ebusuku siyibuyisela ekukhokhiseni uma isisele ngama-50% futhi siyayisusa lapho isishajwe ngokuphelele, sizobe sesenze umjikelezo ophelele wokushaja. U-50% ntambama uhlanganise no-50% ebusuku wenza isamba esingu-100%.
I-iPhone ne-iPad yami inamashajuli amangaki?
Ngokusemthethweni asikho isibalo esiqondile esisitshela ukuthi amadivayisi wethu azoba nemijikelezo emingaki, kepha kunezibalo zesayensi ezilinganisayo cishe imijikelezo yokushaja engama-500 ye-iPhone kanye nemijikelezo yokushaja ephelele eyi-1000 njengempilo ye-iPad yethu. Njengoba sisho, akuyona idatha esemthethweni eyenziwe yi-Apple, yizilinganiso kuphela ezenziwe ngemuva kokufunda amacala amaningana.
Ngisibheka kanjani isimo sebhethri lami?
Kungenzeka ukuthi ngemuva kokufunda konke okungenhla ufuna ukwazi isimo sebhethri lakho nokuthi linemijikelezo emisha emingaki. Le inqubo elula kakhulu esingayenza ngezindlela ezimbili. Owokuqala futhi olula kuzoba ukufaka i- uhlelo lokusebenza lwamahhala bakithi Idivayisi ye-iOS, isinikeza imininingwane eyisisekelo, kepha ngakolunye uhlangothi sinenye inketho ephelele ezodinga ukufakwa kwefayela le- uhlelo lokusebenza ku-Mac noma iWindows yethu.
Uma i-iPhone yakho idinga ukushintshwa kwebhethri, ungakwazi thola ukushintshwa kwebhethri lakho kulesi sixhumanisi.
Ukufaka uhlelo lokusebenza
Into yokuqala okufanele siyenze ukufaka ifayela le- App Store kusuka ku-iPhone yethu noma i-iPad.
Uma sesilapho, sizobheka uhlelo lokusebenza olubizwa nge: Battery Life. Qaphela kakhulu lapho uyifuna, njengoba kukhona eziningana ezinamagama afanayo futhi ezingasenza singalungi. Kuphelele mahhala. Ngezansi ungabona ukuthi kunjani.
Lapho siyilandile futhi sayifaka, a buka ngephesenti. Leli phesenti lisho isimo sebhethri maqondana nesimo salo sokuqala, okusho ukuthi, kithi sikhombisa ama-93% maqondana nezwe elalikulo lapho sithenga umkhiqizo.
Uma sifuna ukwazi ukuthi leli phesenti lilingana nani, kwimenyu engakwesokunxele singafaka inketho «Idatha eluhlaza".
Lapho, kuzosikhombisa ibha enephesenti langaphambilini lapho singabona khona ukuthi u-93% ulingana kanjani 1600mAh kusuka ku-1715mAh enganginakho ekuqaleni.
Ibha engezansi kwayo ibhekisa ku- izinga lokushaja lamanje zedivayisi yethu.
Njengoba sikwazi ukubona, uhlelo oluyisisekelo futhi olulula kakhulu, kepha lusinikeza imininingwane edingekayo yokwazi isimo sebhethri lethu ngesikhathi sangempela. Njengoba sishilo ngaphambili, singaqhubeka futhi sazi ukuthi mingaki imijikelezo yokushaja esiyiphothulile.
Ukufaka iBackupbot ku-Mac yethu
Into yokuqala okufanele siyenze ukulanda uhlelo lokusebenza kusixhumanisi esilandelayo, mahhala ngokuphelele futhi luphephile. Landa iBackupbot ye-Mac. Landa iBackupbot yeWindows.
Lolu hlelo lokusebenza lusetshenziselwa ukwenza amakhophi wesipele wamadivayisi wethu kepha lokhu akuyona inkinga esikhathazayo manje. Ngayo singahlola futhi isimo sebhethri lethu.
Isinyathelo esilandelayo kuzoba xhuma i-iPhone yethu noma i-iPad kwikhompyutha ngentambo ye-Lightning. Ngokushesha nje lapho siyixhuma, uhlelo lokusebenza luzobona idivayisi futhi luzovela ngokulandelayo (1):
Ngokulandelayo kufanele iya kudivayisi yethu (I-iPhone kithi) nemininingwane mayelana nayo izovela, njengoba sikwazi ukubona esithombeni. Kumele chofoza ku- «Olunye ulwazi(I-2)
Uma singena lapho iwindi elilandelayo lizovela lapho, phakathi kweminye imininingwane, lapho singabona khona isimo sebhethri lethu.
Ngabe ulwazi ngalunye lusho ukuthini?
ICycleCount: inani lemijikelezo yokushaja egcwele enedivayisi yakho.
I-DesingCapacity: ishaja umthamo wedivayisi yakho ngesikhathi sokuthenga.
I-FullChargeCapacity: umthwalo omkhulu ongawufinyelela ngedivayisi yakho ngesikhathi isheke lenziwa.
Isimo: isimo sebhethri ngokujwayelekile.
Uma unemibuzo ngemininingwane evelile, ungangabazi ukusibhalela amazwana futhi sizokwazi ukukusiza.
Uma i-iPhone yakho idinga ushintsho lwebhethri ukubuyisela ukuzimela kwayo koqobo, unga thola ukushintshwa kwebhethri lakho kulesi sixhumanisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iPhone » Okokufundisa namanyuwali » Ungasihlola kanjani isimo sebhethri lakho ngalezi zinyathelo ezilula
Okwabavikeli bejele elingekho. Ku-cidya uhlelo lokusebenza oluphelele (lona engilikhipha) ngikunikeza imininingwane eminingi, ngaphandle kwesidingo se-mac ... Kepha-ke, ijele namuhla alinamqondo
Bengingumsebenzisi we-mac, kepha i-macbook ifile, noma kunjalo ngiyakhumbula ukuthi bekunenketho ohlelweni olufanayo lapho ikutshela khona konke lokho ngaphandle kokuthi ufake okuthile
Imininingwane mA nolwazi oluthe xaxa ngisho naku-hard disk
Ku-Ipad yami engu-10.5-intshi kukhombisa lokhu:
Nginokungabaza ku-FullChargeCapacity. Kulungile?. Ngiyabonga
o gavriliuk ir kvitka kusho
Ngithola into efanayo ngakho ngicabanga ukuthi ... ...️
Sawubona. Idatha efanayo ku-FullChargeCapacity 100
Ku-iPad Pro 11 (2018)
UJuan Tenorio kusho
Sawubona kimi ngithola le miphumela:
Ukubalwa komjikelezo: 1048
Amandla we-Designe: 7340
Amandla Okushaja Okugcwele: 100
Umbuzo wami uthi kungani izinombolo ziphuma ziphakeme kunesibonelo osibeke kokuthunyelwe kwakho. Zingaki imijikelezo engadinga ukuthi ibhethri lami le-ipad lifinyelele umkhawulo wayo? Ngiyabonga
Phendula uJuan Tenorio
Ungakuvimbela kanjani ukuvulwa okuzenzakalelayo kwe- "Now Ringing" ku-watchOS 4
I-FCC ifuna i-Apple ivuselele umsakazo we-FM kuma-iPhones